MY REMEMBRANCE: နောင် အနှစ် ၂၀
Posted by puluque at Tuesday, June 02, 2009
နောက်ဆုံး Option က အကောင်းဆုံးများ ဖြစ်မလားမသိ ဟာဟ ...
ဟိုတစ်နေ.သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ဘုန်းကြီးဝတ်တော့ မယ်ကြားရတယ် ၊ တကယ်သာဓုခေါ်မိပါတယ်
သာယာမှုမရှိတဲ့ ဒုကတွေထဲမှာ ကျွန်တော်တို. ရုန်းမထွက်နိုင်သေးပါဘူး ..............
ဒီ post တွေ ဖတ်လာတာ ပုလုကွေးနဲ့ ကျမှပဲ နှမလက်လျော့ နေလေတော့ ကို သတိရမိတော့တယ် (စာဆိုက ရှင်မဟာရဋ္ဌသာရ လား၊ မသိတော့ဘူး)
သြော်..ဖြစ်ပုံ ဖြစ်ပုံ ရီတာလေးပြောသလိုပဲ ပြောလိုက်
သူမ၀ါသနာပါသော ကွန်ပြူတာဆိုင်ကြီးကို အောင်မြင်စွာဖွင့်နိုင်သလို ၊ မိဘအမွေဖြစ်တဲ့ ကားလုပ်ငန်းကြီးကိုလဲ ဦးစီးနိုင်တဲ့ သားကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပါစေလို့...
ပဲခူး အောင်သုခ ဆရာတော်ကြီးရဲ့ လင့်တွေအတွက် ကျေးဇူးပါ .. တရားတွေလို့ထင်ပါတယ် .. ဟုတ်မဟုတ် အိမ်ကျမှ နားထောင်တော့မယ် ..
ဖြစ်လိုတဲ့ ဆန္ဒတွေ ပြည့်စုံအောင်မြင်ပါစေနော် ..း)
ဘုန်းကြီးပဲ ဝတ်တာ ကောင်းပါတယ်။ သံသရာ ဝဋ်ဆင်းရဲက လွတ်မြောက်ဖို့လမ်းစ။
စကားမစပ် သူမဆိုတာက ?
အရင်ဆို ဘယ်နားမှာ သွားဖတ်ပါလို့ ပါနေကျမို့ လင့်လိုက်ရှာနေတာ
ဘုန်းကြီးမ၀တ်နိုင်ရင်လည်း တရားနဲ့နေနိုင်ရင် မဆိုးပါဘူး
Di lo bae may: kyi lite tar par lay.
Option 1: ko myan myan ah kg ah hte phaw ng par say naw........Pu Lu yay...(ae di ah khar kya lae Ngar doe ko ma mae` twer nat own :))
နံပါတ်သုံးကတော့ ဘယ်လိုမှ ဖြစ်နိုင်တော့မှာ မဟုတ်တာ သိနေတယ်။
နံပါတ်တစ်ကတော့ သူမက ELECTRICAL မဟုတ်ပါဘူး။ ELECTRONICS ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ယောက် တွေ့ထားပြီဆိုရင်တော့ မသိပါဘူး။
အနီးစပ်ဆုံးက နံပါတ်၂ပါ။ သူ့အိမ်မှာ ဒီလုပ်ငန်းဆက်လုပ်ဖို့ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတာ သူပဲရှိပါတယ်။ နံပါတ်၁ လုပ်ငန်းကိုပါ တွဲလုပ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
နောက်ထပ် ဖြစ်နိုင်စရာတစ်ချက်ကိုတော့ ဒီမှာ မရေးခဲ့တော့ဘူး။ သိချင်ရင် လာမေးပါး)
နံပါတ်သုံးတော့ လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာ နံပါတ်၁ အဖြေမှာပြနေသလိုပဲ... ၅တန်းလားတုန်းက သင်ရတဲ့ မောင်ရင်လောင်းကဗျာထဲကလို သံယောဇဉ်တွေ မပြတ်နိုင်လောက်ဘူး...
ဒါမှမဟုတ် သူမကိုများ ဒီပိုစ့်ရေးပြီး လှမ်းခြိမ်းခြောက်လိုက်တာလား.. ဟီး.. ဟီး..
ဘုန်းကြီးသာ ဝတ်ဗျား အကောင်းဆုံးပဲ အဟီး